ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပခရီး နဲ့ မြန်မာအစိုးရ ဗွီအိုအေဘာသာစကား ရွေးချယ်ရန် ထိပ်တန်းသတင်းများ English WorldwideEnglishvoanews.comLearning Englishlearningenglish.voanews.comEastern & Central EuropeShqipZeriamerikes.comBosanskivijestiglasaamerike.comΕλληνικάgr.voanews.comМакедонскиmk.voanews.comSrpskiglasamerike.netУкраїнськаchastime.comEurasiaՀայերենamerikayidzayn.comAzerbaijaniamerikaninsesi.orgქართულიamerikiskhma.comРусскийgolos-ameriki.ruCentral AsiaO‘zbekamerikaovozi.comEast & Southeast AsiaBurmeseburmese.voanews.com粵語voacantonese.com中文voachinese.comBahasa Indonesiavoaindonesia.comខ្មែរkhmer.voanews.comKhmervoacambodia.com한국어voakorea.comລາວlao.voanews.comไทยvoathai.comབོད་ཡིགvoatibetan.comTibetanvoatibetanenglish.comTiếng Việtvoatiengviet.comSouth Asiaবাংলাvoabangla.comدریdarivoa.comپښتوpashtovoa.comوی او اې ډيوه ريډیوvoadeewaradio.comاردوurduvoa.comAfricaAfaan Oromoovoaafaanoromoo.comአማርኛamharic.voanews.comFrançaislavoixdelamerique.comHausavoahausa.comKinyarwandaradiyoyacuvoa.comKirundiradiyoyacuvoa.comNdebelevoandebele.comPortuguêsvoaportugues.comShonavoashona.comSoomaaligavoasomali.comKiswahilivoaswahili.comትግርኛtigrigna.voanews.comZimbabwevoazimbabwe.comMiddle East / North Africaفارسیir.voanews.comكوردیdengiamerika.comKurdidengeamerika.comTürkçeamerikaninsesi.comLatin AmericaCreolevoanouvel.comEspañolvoanoticias.com
တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် နံနက် ၆း၀၀-၆း၃၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် နံနက် ၆း၃၀-၇း၀၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် ညနေ ၆း၃၀-၇း၀၀တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် ည ၉း၀၀-၁၀း၀၀ နံနက် ၆း၀၀-၆း၃၀နံနက် ၆း၃၀-၇း၀၀ညနေ ၆း၃၀-၇း၀၀ညပိုင်း ၉း၀၀-၁၀း၀၀ ယခင်အစီအစဉ်ဟောင်းများပေါ့ဒ်ကတ်စ်မိုဘိုင်းလ် ဗွီအိုအေမြန်မာ - YouTube နေ့စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာအပတ်စဉ် တီဗွီသတင်းလွှာဗွီဒီယိုသတင်း မျက်မှောက်ရေးရာ / သတင်းသုံးသပ်ချက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပခရီး နဲ့ မြန်မာအစိုးရ ပုံနှိပ်ရန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပခရီး နဲ့ မြန်မာအစိုးရ နားဆင်ရန်Playlist
Last updated at: 17.07.2012 19:30
This forum has been closed. Comments There are no comments in this forum. Be first and add one တခြား ဖတ်စရာများ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ NLD ဝင်မဝင် KAF နဲ့ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး အလားအလာ မြန်မာအစိုးရရဲ့  လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အတိမ်အနက် (၂၆) နှစ်အကြာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာ More Articles နေ့စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၁၀-၂၄-၂၀၁၄)
နယူးယောက်မြို့မှာ အီဘိုလာရောဂါ ပထမဆုံးကူးစက်ခံရသူတယောက် တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ ကနေဒါနိုင်ငံ Ottawa မြို့တော်မှာ တိုက်ခိုက်ခဲ့သူဟာ တကိုယ်တော် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ရဲကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူသတ်မှုနဲ့ စွပ်စွဲခံထားရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ ဦးကို မိသားစုက သွားရောက် တွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်း စသဖြင့် …. ထိပ်တန်းသတင်းများ ဟောင်ကောင် လူထု ဆန္ဒ္ဒခံယူဖို့ စီစဉ် မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ နျူကလီယား အရေး ဆွေးနွေးဖို့ ကန်လိုလား အီဘိုလာ အကူးစက်ခံရသူ ကန် သူနာပြုတွေ ပျောက်ကင်းပြီ သတင်းထောက် ကိုပါကြီး သေဆုံးရမှု သူတို့ အမြင် ISIS ကို ဆီးရီးယား အတိုက်အခံ Kurds နဲ့ ပေါင်း တိုက်မည် ၂၀၁၅ မှာ WHO Ebola ဆေး သိန်းချီ ထုတ်မည် အများဆုံးဖတ်ရှုသည့် သတင်းများ သတင်းထောက် ပါကြီးကို အသေ ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်း စစ်တပ် ထုတ်ပြန် သတင်းထောက် ကိုပါကြီး သေဆုံးရမှု သူတို့ အမြင် ထိုင်း နိုင်ငံရေးကြောင့် Cobra Gold အဆင့်လျှော့ ISIS ကို ဆီးရီးယား အတိုက်အခံ Kurds နဲ့ ပေါင်း တိုက်မည် Harry Potter မင်းသမီးလေး Emma Watson ရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့မိန့်ခွန်းအများဆုံးအီးမေးပို့သည့် သတင်းများNo itemsအများဆုံးကြည့်ရှုသည့် ဗွီဒီယိုသတင်းများJean-Claude Duvalier Mande Padon ak Rekonsilyasyon Nan Peyi Dayiti နေ့စဉ်သတင်းလွှာ (၁၀-၂၄-၂၀၁၄) မတူတာလေးတွေ ကမ္ဘာ့သတင်း စက္ကန့် ၆၀ ထူးခြားဆန်းပြား